Ngaphakathi kwi-AirTags, ukuhanjiswa kweMac kunye nokunye. Eyona veki ilungileyo ndivela kuyo iMac | Ndisuka mac
Enye iveki sifuna ukwabelana nani nonke ngezona ndaba zibalaseleyo ndivela eMac. ezinye iinkqubo zokusebenza zika-Apple. Njengazo zonke iiCawe kuluyolo kuthi Yabelana ngezinye zezi zinto zibalulekileyo hleze ubethwe ngoyaba.
Ukusuka kwiwebhusayithi ye-iFixit Bahlala besibonisa into ekungelula ukuyibona, ngaphakathi kwezixhobo zeApple kunye nezinye izinto. Kule meko basibonisa yona yi-AirTag entsha Ukusuka kuApple, le ndawo incinci ikunika into eninzi yokuthetha ngayo phakathi kwabasebenzisi beApple.
Zonke iindaba eziqaqanjisiweyo kule veki ngokungathandabuzekiyo zibanzi Amaxesha okuhanjiswa kwezixhobo ezintsha zeApple, kubandakanya iMac yethu ethandekayo. Kule meko Zonke i-Apple zonke-ngaphakathi zandisa amaxesha azo okuhambisa kwiindawo ezingazange zibonwe ngaphambili, kwaye oku ngengqondo ayilunganga kubasebenzisi kwaye nakwinkampani.
Kulungile ukuba siye ekuqaleni kokugqibela Inguqulelo ekhoyo MacOS Big Sur 11.3.1 sele isezandleni zabasebenzisi kwaye kule meko ilungisa ingxaki ebalulekileyo yezokhuseleko ukuze Kuya kufuneka uhlaziye iMac yakho ngokukhawuleza ukuba awukabikho.
Las uqikelelo lwentengiso malunga neApple iMac entsha zilunge ngokwenyani kwaye ezinye Abahlalutyi bathi baya kuthengisa ezinye iimveliso ukubonelela ngeekhompyuter zonke-in-enye ezifanayo neMac. Ukuthetha ngokwam ndingathi ubeka yonke into kwenye bayigqitha iMac kwizixhobo zehardware / zesoftware kodwa kunjalo zixhomekeke kakhulu ekusebenziseni nakwezinye izinto.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Ngaphakathi kwi-AirTags, ukuhanjiswa kweMac kunye nokunye okuninzi. Eyona veki ibalaseleyo ndivela eMac
UMj Rodriguez udibana namaMaya Rudolph kuLuhlu oluNtsha lwaMahlaya